उमेर बढ्दै जाँदा स्मरण शक्तिमा आउने ह्रास रोक्न के गर्ने ? – सुदूरखबर डटकम
काठमाडौं, असार १९ । मासिनहरुको उमेर बढ्दै जाँदा स्मरण शक्ति पनि क्रमशः घट्दै जान्छ । अधिकांशमा यो समस्या देखा पर्दछ । दिमागलाई तजे बनाइ राख्ने के गर्ने ? भन्ने विषयमा मानिसहरु अनविज्ञ हुन्छन् । यस सम्बन्धी गरिएका विभिन्न अध्ययनहरुले यस्तो देखाउँछ–
स्वीडेनको गोदनवर्ग विश्वविद्यालयका अनुसार, ‘यो नतिजाले यस्तो संकेत गर्छ, अधबैँशे उमेरका र बुढापाका सक्रिय बन्नु नै स्मरणशक्ति बढाउनु हो ।’ स्वास्थ्यलाई सुरक्षित राख्न व्यायाम पनि आवश्यक छ । यसले मानिसको व्यक्तित्व बढ्नुका साथै स्मरण शक्ति जोगाइराख्न मद्धत मिल्छ । स्वीडेनमा गरिएको उक्त अध्ययनमा ८०० महिला सामेल थिए जसमा धेरैको उमेर ४७ वर्ष बढीको थियो ।